ERW (Electro-Resistance welded) Sodina-dalana - China Qingdao Haokun milina
ERW (Electro-Resistance welded) Sodina-dalana, Ho vokatry ny fampandrosoana ara-toekarena haingana any Shina, misy avo mitaky ny tsara kalitao, savaivony ERW fantsona lehibe ho an'ny solika sy entona fitaterana, rano & sewerage fitaterana sy ny sivily fanorenana orinasa. Mba hanomezana fahafaham-po ny fepetra takiana ny mpanjifa, manana ny patented manokana HAOKUN ERW Tube pamokarana. To-daty, efa nanome savaivony ERW16 lehibe ', ERW 20 ", ERW 24" isan-karazany ho an'ny mpanjifa. Isika miaraka mba hanasongadinana ny tranga izay ...
Vokatry ny fampandrosoana ara-toekarena haingana any Shina, misy avo mitaky ny tsara kalitao, savaivony ERW fantsona lehibe ho an'ny solika sy entona fitaterana, rano & sewerage fitaterana sy ny sivily fanorenana orinasa. Mba hanomezana fahafaham-po ny fepetra takiana ny mpanjifa, manana ny patented manokana HAOKUN ERW Tube pamokarana. To-daty, efa nanome savaivony ERW16 lehibe ', ERW 20 ", ERW 24" isan-karazany ho an'ny mpanjifa. Isika miaraka mba hanasongadinana ny tranga izay efa namatsy ny ERW 25 "Tube Mill an'i Guangzhou Juyi Sodina Factory. Ao amin'io Mill, izahay koa dia namorona ny marindrano Loop Accumulator, ny hafainganam-pandeha avo Coil Edge nijoro sy manidina Curter hanatsarana ny fahaizany. Iray hafa ERW 25 "Tube Mill ihany koa amin'izao fotoana izao ny nanome antsika Mozambika WBHO Company. Ankoatra ireo andinin-tsoratra masina, dia manangona antontan-kevitra ho an'ny fikarohana ERW X 19.1 MM 630 vy kilasy X80 ao amin'ny famolavolana trano famakiam-boky. Afaka matoky isika milaza fa efa nahazo fanjakana -of-hahalala ny kanto-ny fomba ho an'ny lehibe savaivony ERW Tube Mill.
Taorian'ny fifadian-kanina fitomboan'ny Shinoa toekarena, avo-kilasy, lehibe savaivony ary avo matetika diso seam welded fantsona dia be mpampiasa any amin'ny faritra toy ny solitany fitaterana, tanàn-dehibe fantsona tambajotra sy ny fanorenana, nanosika ny fangatahana ho azy ireo, izay miteraka vaovao fampandrosoana fahafahana sodina tsipika orinasa mpamokatra entana, sy ny orinasa mpanamboatra fitaovana.
Nandritra ny tato anatin'ny taona vitsy, amin'ny alalan'ny fianarana sy ny milina mitroka mandroso ERW teknolojia avy any ivelany izahay, ary lasa be natao savaivony ERW famokarana andalana miaraka amin'ny fananana ara-tsaina ny zo. Tokan-tena indrindra fa ny sasany venty, toy ny famihinana-roller, efa patented any Shina. Hatreto, efa vita ny nanaovany be fakan-tahaka toa ERW famokarana amin'ny fepetra arahana tsipika: 16 "ERW, 20" ERW, 24 "ERW. Anisan'ireo ny 20 "ERW, 24" ERW famokarana ireo fikosoham-bary ho asa efa nataony; Fa Guangzhou Juyi Steel Sodina Manufacturing Co., Ltd, hafa tanteraka napetraka ny 25 "ERW pamokarana amin'ny marindrano manome fitoerana. High Speed ​​Edge nijoro Machine amin'ny orinasa mpanatsofa hazo. Nanapaka Machine sy vita ny Vondrom-paritra, dia efa ao amin'ny asa; tanteraka napetraka ny 25'ERW andalana ho aondrana any WBHO tany Afrika Atsimo dia efa eo ambany fitiliana.
Ankoatra izany, ny orinasa rehetra efa nahay teknika ERW630x19.1mm vy kilasy X80, ary efa nivoatra JCOE1420x32mm vy kilasy X80 welded sodina pamokarana.
Strip fanomanana ampahany vy
Uncoiling : roa mitondra fiara zana fanitarana ny asa fanaraha-maso sy ny fihenjanana marindrano fanitsiana ny esory vy
Haka vy flattening milina : Miaraka 5 horonam-miasa nosokafana / mihidy haingana ny hydraulic varingarina.
Welding dingan'ny lovia amin'ny loha sy ny rambo mifarana : MAG welding, entona CO2 ampinga lehibe.
Mitsivalana welding milina famolavolana : Natambatra fanapahana sy ny welding miaraka.
Toerany ny esory vy eo anatrehan'i welding : Avy hatrany mandrefy sy hampifanaraka ny toerana ny esory vy.
Miolakolaka accumulator : ivelan'ny ao anatiny avy
Strip sakafo haingana : Maximum 75m / min.
Haavon'ny Rolling tsipika : Tokony ho 1000mm ambony amin'ny faravodilanitra
Fomba Production : mitohy ny famokarana
Speed-pamokarana : 12m / min ~ 25m / min.
Drive karazana tena endriny : tsirairay dia misaraka horonan-taratasy entin'ny CNC AC miova matetika fanaraha-maso na ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha DC fanaraha-maso
Mamorona hevitra : Fix ny Rolling andalana, any forming fomba
Haavon'ny afovoany tsipika : Tokony ho 1000mm ambonin'ny faravodilanitra (sizing fizarana)
Type ny mamorona : tranom-borona namorona
Fametrahana ny nanakodia bary : plc-maso haingana sy ny boky fampianarana rafitra toerana voatery toerana
Fanitsiana ny horonam-bary : plc-maso fanitsiana mandeha ho azy sy ny boky fampianarana ahitsy.
Inner Burr fikikisana : Inner Burr dia scrapped amin'ny alalan'ny fampiasana antsy peratra izay nametraka fitaovana manokana sasatra.
Burr ivelany fikikisana : roa scrapers ny ivelany ary iray Burr crimpers ny Burr ivelany.
S izing ny sodina : efatra ireo fitoeran-tavin-sizing ampiasaina amin'ny famokarana boribory sodina.
Steel sodina nanitsy : hanitsy ny vorontsiloza fantsona vy sy ny lohan'ny sizing fitotoam-bary.
Fomba fiaramanidina tsofa : CNC Double fanapahana fikosoham-bary nanidina notapahina-doha ny milina.
Manaraka: Miolakolaka Sodina Mill
30inch Longitudinal anaty rano Arc welded Steel Sodina Mill
30longitudinal anaty rano Arc welded Steel Sodina Mill
762 Longitudinal anaty rano Arc welded Steel Sodina Mill
Erw Carbon Steel Sodina Mill
Erw Machine sodina Mill
Erw Sodina fiforonana Machine
Erw Sodina Machine
Erw Sodina Mill 168
Erw Sodina Mill 219
Erw Sodina Mill 273
Erw Sodina Mill 406
Erw Sodina Mill 508
Erw Sodina Mill 610
E RW Sodina Mill-dalana
Erw Sodina Mill fanamboarana
Erw Sodina Mill Manufacturers
Erw sodina Mill Production-dalana
Erw Sodina Tube Mill
Erw sodina welded Machine
Erw sodina-Profile Production
nandrisika Tube Ny fanaovantsika Machine
High Frequency Erw Sodina Mill
Frequency avo Inducion Welding Sodina Mill
Frequency avo Induction Welding
Frequency avo Welding Sodina Mill
Mpiara-Butt Welding Machine
Longitudinal anaty rano Arc Welding Sodina Machine
Longitudinal anaty rano Arc Welding Sodina Mill
Lsaw Sodina Machine
Lsaw Sodina Mill
Lsaw Sodina Mill 762
Metal sodina Machine
OD & I.D. Weld Karakarao tsara
sodina Machine Ny fanaovantsika
Sodina Ny fanaovantsika Machine
sodina Production Line
sodina Fiharatana Machine
Pressure Steel sodina
Sawl Sodina Machine
Sawl Sodina Mill
SS Sodina Manao Machine
Ssaw Sodina Mill
Ssaw Sodina Mill 100
Ssaw Sodina Mill 100 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 1020
Ssaw Sodina Mill 120
Ssaw Sodina Mill 120 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 1220
Ssaw Sodina Mill 142
Ssaw Sodina Mill 142 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 1422
Ssaw Sodina Mill 1620
Ssaw Sodina Mill 1820
Ssaw Sodina Mill 20
Ssaw Sodina Mill 20 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 2032
Ssaw Sodina Mill 2200
Ssaw Sodina Mill 24
Ssaw Sodina Mill 24 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 2540
Ssaw Sodina Mill 3048
Ssaw Sodina Mill 32
Ssaw Sodina Mill 32 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 36
Ssaw Sodina Mill 36 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 3600
Ssaw Sodina Mill 40
Ssaw Sodina Mill 40 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 48
Ssaw Sodina Mill 48 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 508
Ssaw Sodina Mill 56
Ssaw Sodina Mill 56 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 610
Ssaw Sodina Mill 64
Ssaw Sodina Mill 64 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 72
Ssaw Sodina Mill 72 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 80
Ssaw Sodina Mill 80 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 820
Ssaw Sodina Mill 86
Ssaw Sodina Mill 86 santimetatra
Ssaw Sodina Mill 914
Steel Tube Production-dalana
Tack-Final welded Sodina Mill
Tack-Final welded Sodina Mill 100
Tack-Final welded Sodina Mill 100 santimetatra
Tack-Final welded Sodina Mill 1422
Tack-Final welded Sodina Mill 1620
Tack-Final welded Sodina Mill 1820
Tack-Final welded Sodina Mill 2032
Tack-Final welded Sodina Mill 2200
Tack-Final welded Sodina Mill 2540
Tack-Final welded Sodina Mill 56
Tack-Final welded Sodina Mill 56 santimetatra
Tack-Final welded Sodina Mill 64
Tack-Final welded Sodina Mill 64 santimetatra
Tack-Final welded Sodina Mill 72
Tack-Final welded Sodina Mill 72 santimetatra
Tack-Final welded Sodina Mill 80
Tack-Final welded Sodina Mill 80 santimetatra
Tack-Final welded Sodina Mill 86
Tack-Final welded Sodina Mill 86 santimetatra
nampiasaina Erw Sodina Mill
Welding Sodina Production-dalana